Ciidamadii ugu badnaa ee Booliska oo la dhigay Wadooyinka Muqdisho & Howlgallo ka socda - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ciidamadii ugu badnaa ee Booliska oo la dhigay Wadooyinka Muqdisho & Howlgallo ka socda
Ciidamada Booliska dowladda Federalka Soomaaliya ayaa si weyn u xoojiyey howlagallada Amniga iyo baaritaannada ay ka wadaan Magaalada Muqdisho xilli ay xilka taliska Booliska kusimenimo u heyso taliye ku xigeenka Zakiyo Xuseen.
Ciidamo badan oo Boolis ah oo wata gaadiid kala duwan ayaa la dhigay wadooyinka Muqdisho intooda badan, waxayna si taxadar leh u baarayaan gawaarida kala duwan, howlgallada ay ciidamadu wadaan saaka ayaa laga daraamay isgoysyada Muqdisho, iyadoo qaab cusub u baaraya gaadiidka iyo dadka wata.
Ciidamada Booliska ayaa ah kuwo saaxiib la ah dadweyne oo asluubtoodu fiican tahay, iyagoo ka duwan c ciidamdii hore ee nabadgelyada magaalada qaabilsanaa, waxaana yaraaday saxmadii badneyd iyo cabashadii dadweynaha ku qabeen wadooyinka xiran.
Ammaanka Guud ee Magaalada Muqdisho ayaa iminka toos ah loogu wareejiyay Ciidamada Booliska Soomaaliya oo jid waliba, taagan, waxaana muuqata in hoggaanka cusub uu sii xoojiyey howlaha sugidda amniga caasimadda.
Golaha Wasiirada oo Go'aan cusub ka qaatay qaabka Saxiixyada Heshiisyada Caalamiga ah [Akhriso]
Siciid Deni: ” haddii dowlad la wada dhisan waayo, Nin walba Goofkiiisa ha aado”